Even “Bare Bones” EU-Britain Deal Will Be Complex: Diplomats | Myanmar Business Today
Home Business International Even “Bare Bones” EU-Britain Deal Will Be Complex: Diplomats
Even “Bare Bones” EU-Britain Deal Will Be Complex: Diplomats
Small toy figure is seen in front of UK and European Union displayed flags in this illustration picture, October 17, 2019.
After Britain formally leaves the EU on January 31, it entersatransition period until the end of 2020 during which it will remain an EU member in all but name while both sides try to hammer outadeal on their future relationship.
“Usually in the EU things don’t get moving until there isareal crisis,” the diplomat said on January 23.
But if it includes agreements on aviation, security, transport or mobility of citizens – areas of competence of EU member state governments – national parliaments would have to haveasay, increasing the risk of delays anda“no deal”.
ဥရောပ သမဂ္ဂနှင့် ဗြိတိန်တို့အကြား အနားဂတ်ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသော သဘောတူညီချက်များ ရေးထိုးခြင်းကလည်း ရှုပ်ထွေးမှုများစွာရှိပြီး အဆိုပါ သဘောတူညီချက်ကို ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရန်အချိန်ကလည်း နည်းပါးနေရာ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ တွင် ဥရောပသမဂ္ဂမှ ဗြိတိန်နှုတ်ထွက်မည့်ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်ဟု သံတမန်များက ဆိုကြသည်။
အခြေခံသဘောတူညီချက်ထဲတွင် လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ခွင့်စာချုပ်၊ မျှတသော ယှဥ်ပြိုင်မှုကို ဖန်တီးပေး၇န်အတွက် ညီမျှသော စည်းမျဥ်း၊ စံနှုန်းများ ထိန်းထားရေး သဘောတူညီချက်၊ ဆက်ဆံရေးတိုးချက်ရန် အစိုးရဖွဲ့စည်းပုံတို့ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ဥရောပသမဂ္ဂမှ ဗြိတိန်နှုတ်ထွက်ပြီးနောက်တွင် ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်အထိ အကူးအပြောင်းကာလတွင် ဗြိတိန် နိုင်ငံသည် ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းတွင် ဆက်ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သော်လည်း နာမည်အရ ဆက်မရှိတော့ပေ။ အဆိုပါ ကာလတွင် အီးယူနှင့် ဗြိတိန်တို့သည် ၎င်းတို့၏ အနာဂတ်ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောတူညီချက်တစ်ခုကို ချမှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ကတော့ ၎င်းအနေဖြင့် အကူးအပြောင်းကာလကို သက်တမ်းတိုးရေး ကြိုးပမ်းမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောသည်။ ထိုသို့ သက်တမ်းမတိုးပါက ယခုနှစ်ကုန်တွင် သဘောတူညီမှုမရသည့် အနေအထားကို ရှောင်လွှဲနိုင်ရေး အချိန်ကာလ နည်းပါးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ သဘောတူညီချက်ကို ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက အောက်တိုဘာလလယ်တွင် သဘောတူညီချက်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ တရားဝင် ဘာသာ ၂၃ မျိုးသို့ ဘာသာပြန်ရန် အချိန် လုံလောက်မည်ဖြစ်သည်။
Previous articleShares Hold Ground as China Virus Fears Persist
Next articleNTT Myanmar Gears Up to Offer ICT Enterprise Solutions